HomeWararka Ciyaaraha MaantaAndrea Pirlo oo sheegay in uusan iska casili doonin shaqada Juventus.
Andrea Pirlo ayaa sheegay inuusan wax damac ah ka qabin inuu macalin u noqdo kooxda Juventus xitaa madaama isku dhacyadooda ay u horseedi karto inay ka maqnaadaan Champions League.
Tababarahaan ayeey kaliya u tahay sanadka koowaad ee Juventus waxaana soo fuulag cadaadis xoog leh dhawaanahan iyadoo xidigiisa ay guuleysteen kaliya labo ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeysay, waxaana xalay 3-0 qasaaro ah kala kulmeen AC Milan axadii.
Andrea Pirlo ayaa sheegay in uusan is casili doonin isagoo dhanka kale tilmaamay in uusan sameeyn doonin waxyaabo keeni kara isku dhacyo maadama horyaalku gabagabo ku dhowyahay oo kaliya ka harsan tahay sedax kulan.
Juventus ayaa halis ugu jirta in ay weyso booska loogu soo baxo champions league xagaaga dambe waxaana hada ay ku jiraan booska shanaad iyagoo leh 69 dhibcood iyagoo ka hooseeyaan kooxaha Napoli, Ac milan, Atlanta iyo inter milan.